कांग्रेस बैठक : प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिने, राष्ट्रियसभामा माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने « Sudoor Aaja
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार १७:५७
कांग्रेस बैठक : प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिने, राष्ट्रियसभामा माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने
सुदूर आज २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १७:५७
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक सकिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा त्यसको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
“आगामी २७ गते विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,” कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, “हामीले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकबाट विश्वासको मतको खिलाफमा उभिने निर्णय गरेका छौ ।”
उनले कांग्रेसले आगामी २७ गते प्रधानमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मतमा संसदको विश्वास नहुने अवस्था निर्माणका लागि पहल गर्ने पनि जानकारी दिए ।
यस्तै कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माओवादीसँग ‘एलाइन्स’ गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभामा खाली भएका सिटमा एक–एक सिट हुने गरी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
“राष्ट्रियसभामा दुइसिट खाली भएको छ,” डा. महतले भने, “आगामी जेठ ६ वाग्मती प्रदेशमा निर्वाचन घोषणा भएको छ । त्यसलगत्तै लुम्बिनीमा पनि निर्वाचन घोषणा हुने छ । त्यसमा एक एक सिट हुने गरी माओवादी केन्द्रसँग एलाइन्स हुने छ ।”
उनले पार्टीको १४औं महाधिवेशनका लागि सदस्यता छानबिवनसहितका आन्तरिक गतिविधि जारी राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता तोकिएको छैन
महतले सहमहामन्त्रीलाई प्रवक्ता तोकिएको भन्दै समाचार आइरहेको भन्दै खण्डन गरेका छन् । उनले आफू सहमहामन्त्री भएको र पार्टीका आधिकारिक धारणा राख्न प्रवक्ता तोकिनु नपर्ने भन्दै त्यस्ता समाचारको खण्डन गरेका हुन् ।
“कांग्रेसमा आवश्यक सबै काम सचिवालयबाट भइरहकै छन् । अहिले प्रवक्ता तोक्नुपर्ने जरुरी छैन,” डा. महतले भने, “म पार्टीको सहमहामन्त्रीको हैसियतमा आधिकारिक धारणा राख्दै आएको छु । प्रवक्ता तोकिएको भन्दै आएका समाचारहरु गलत हुन् ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार धरापमा, जसपाले साथ दिए एमालेको बहुमत
धनगढी- नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ
काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशकाे राजनीति रहस्यमय बाटोमा धकेलिएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत
तीन दलको निष्कर्ष : कच्चा खेल खेल्नु उचित होइन
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीले बहुमत नपुगी गठबन्धन सरकारको दाबी गर्नु उचित नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। तीन दलका शीर्ष
प्रधानमन्त्री ओलीले आज दिउँसो २ बजे शपथ लिँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज दिउँसो २ बजे शपथ लिने भएका छन् । शपथको तयारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता